Hamehana tsy am-piheverana • AoRaha
Hamehana tsy am-piheverana
Mampitaraina hatrany sady mampanontany tena foana ny fahaizan’ ireo manampahefana isan’ambaratongany amin’ny fandrindrana ny asa samihafa ao anatin’izao vanim-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana eto Antananarivo izao. Miova isan’andro, ohatra, ny fepetra amin’ny fahafahana mivezivezy eny an-dalam-be, hany ka mifanohitra be ihany ny zavamisy amin’ny fotoana iray mitovy saingy amin’ny toerana samy hafa.
Tahaka ny soratra fotsiny ny ranomainty voarakitra ao anatin’ireo naoty navoakan’ny fanjakana, fa indraindray samy manana ny heviny sy ny ataony ireo mpitandro filaminana. Sanatria toa narafitra ao anaty hamehana tokoa ve ireny fampahafantarana miendrika didy ireny, avy eo vao manamboamboatra amin’izay mety ho tandrifiny ny tsirairay.
Ny fikorontanan’ny saim-bahoaka kosa no setrin’izany, indrindra fa miha mitombo ny tebitebin’ny mponina manoloana ny fihanaky ny aretina «Coronavirus », tao anatin’ny andro vitsy monja. Tsy voafetra araka ny tokony ho izy sy hentitra akory ny mason-tsivana ho an’ireo afaka mivezivezy, miaraka amin’ny fiara na an-tongotra, eny an-dalana. Ao ireo voasakana sady tsy afa-mihetsika kanefa mazava be fa sokajin’olona tafiditra amin’ireo mbola manatanteraka ny asa aman-draharahany, na dia eo aza ny hamehana ara-pahasalamana. Ao koa ireo noterena hidina ny fiara ka manohy an-tongotra ny dia alehany nefa dia zaza marary hoentina eny amin’ny tobim-pahasalamana no eny an-trotroany.
Fisorohana ombam-pifamonjena sy fifanentanana no tsara miaraka amin’izao toe-draharaha izao, dia aoka ho avahana tokoa ireo voatery mivoaka ny tranony noho ny antony hamehana sy ireo mpidonana-poana na mpihoa-pefy zatra ny baranahiny.
Zava-dehibe ny fampiharana an-tsakany sy an-davany an’izay toromarika napetraky ny fanjakana amin’ny vanim-potoana toy izao, saingy haverina sady hamafisina ihany ny fitakiana ny fahaiza-miasa eo amin’ireo tompon’andraikitra isan-tokony. Ilaina ny fiahiana ny maha-olona mba tsy ho “baikon-tsônegaly”, araka ny fomba fitenenana, sao sanatria hanitatra ny fahavoazana efa mavesatra isam-batan’olona, ka tsy ny tsimok’aretina “Covid-19” no handripaka eto fa ny fifampitsimbadihan’ny fampiharana ny fitsipika etsy sy eroa.
Handringa koa ny fampanajàna ny fampihibohana raha ahitana gaboraraka hatrany any amin’ireo toerana hafa, satria tsy maintsy mitovy ny fanarahana ny toromarika manerana an’Analamanga sy ireo faritra nodidian’ny fanjakana momba ny famerana ny fivezivezena eny andalambe. Samy maika isika izao, maika ny hifehy tanteraka ny fiparitahan’ny aretina “Coronavirus”, saingy aoka hahay hijery lalana sy hahay hamindra.
Tapa-doha sa tapa-drambo ?
Ho tezitra sa ho hentitra
Fiverenana eny ifotony